यस्तो छ विश्वप्रकाशले चुनाव हार्नुको कारण, कविता भन्छिन- ‘श्रीमानले चुनाव हारेकै होइन’ – तहल्काखबर
यस्तो छ विश्वप्रकाशले चुनाव हार्नुको कारण, कविता भन्छिन- ‘श्रीमानले चुनाव हारेकै होइन’
जीवनशैली निर्बाचन २०७४ राजनीति विचार समाचार स्थानीय
विर्तामोड / झापामा रहेका ५ निर्वाचन क्षेत्र चुनाव ०७४ मा आ–आफ्नै विशेषताका कारण चर्चामा रहे । क्षेत्र नं १ बामगठबन्धनका उमेरद्वार राम कार्की पार्थ र नेपाली कांग्रेसका उमेरद्वार विश्वप्रकाश शर्मा बिचको चुनावी टक्करका कारण निरन्तर चर्चामा रह्यो ।
त्यहाँको मत गणना पश्चात चुनावी परिणाम पनि आईसकेको छ । राम कार्की विजयी पनि भईसकेका छन् । शर्मालाई कार्कीले ३ हजार २ सय ६३ मतले पराजित पनि गरे । चुनाव अघि त चर्चामा थियो यो क्षेत्र । तर, चुनावपछि पनि चर्चा कम छैन शर्माकै कारण १ नंवर क्षेत्रमा । बौद्धिक र सालिन व्यक्तिको परिचय बनाएका शर्माको चुनावअघि,चुनाव हुदैगर्दा र परिणाम आइसकेपछि उनका बारेमा सबभन्दा नजिक रहेर जानकारी राख्ने व्यक्तिको विचार के छ भनेर खोतल्ने प्रयास गरेको छ, तहल्का खवरले ।
धुलाबारीको टाउनहलमा एक विवाह उत्सवमा जम्काभेट हुँदा धुलाबारी लेडी जेसिजकी संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेकी कविता शर्मा (विश्वप्रकाश शर्माकी अर्धाङ्घीनी) सँग श्रीमानको राजनीतिक जीवन र पृथक रहेर गरिएको कुराकानी ।
भर्खरै चुनाव सम्पन्न भयो श्रीमान चुनावमा हार्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
मैले यसलाई हार भनेर लिएको छैन । यति धेरै मत पाउनु भाको छ , त्यो नै ठूलो कुरा सम्झेको छु । तिन तिनवटा पार्टी एकातिर हँुदैगर्दा उहाँ एक्लै भिडिरहँदा त्यसलाई मैले हार भन्दा माया गर्नु भाको छ , जनताको मत पाउनु भाको छ मैले यसलाई जनताको मायाको रुपमा लिएको छु ।
स्थानीय व्यक्ति, सबैको प्रिय बौद्धिक व्यक्तित्व भनेर चिनिनु हुन्छ उहाँ त्यति हँदाहँदै पनि के कारणले चुनाव हार्नुभो उहाँले ? तपाईलाई के लाग्छ ?
यो चाँहि जित नै हो । मैले अघि पनि भने, हार होइन यो । किनभने तिनवटा पार्टी एकातिर थिए । तीनवटा पार्टी एक्ला एक्लै थिए भने उहाँको धेरै मत हो । उहाँले धेरै मतले जितिसक्नु भाथ्यो । तर, यति हँदा हँदै पनि केही कमी कमजोरी भएर मत पाइएन की ? हामीले सुधार गर्नुपर्छ । तरपनि मैले यसलाई हार होइन जितकै रुपमा लिएकी छु ।
ठ्याक्कै हार्नुको कारण चाँही के होला ? यस्तो गरेको भए जित्नुहुन्थ्यो त्यो भएन भन्ने केही छ ?
केही छैन त्यस्तो । गठबन्धन नै हो । उहाँहरु तिनवटा पार्टी एकातिर हुनुहुन्थ्यो । हामी एक्लै थियौँ । एक्लै हुदैगर्दा पनि हामीलाई नेपाली कांग्रेसको मत मात्र होइन अन्य पार्टीले पनि मायाँ गर्नु भाछ । उहाँहरुको मत पनि छ, त्यसैले यहि कारण हारियो भन्ने चै छैन । गठबन्धन नै हो ।
थोरै मतान्तरले पराजित हुनु भो उहाँ तपाँइले यसलाई हार त भन्नु भाकै छैन होइन ? त्यसो भए यस्तो गरेको भए जितिन्थ्यो भन्ने मूल्याङ्कन त गर्नु भो होला नी ?
धेरै मतदाताको चाहना के थ्यो भने मेरो घरमा आइदियोस् भन्ने थियो । कम्तिमा मेरो घरमा आइदियोस् भन्ने थियो । तर, क्षेत्र ठूलो थियो ,सम्भव थिएन सबैको घर घर पुग्ने । कतिपय टोलमा पनि पुग्न संभव भएन । त्यो चाहना पुरा गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ ।
मत परिणाम आउनु अघि र परिणाम आइसकेपछि उहाँको व्यवहारमा के फरक पाउनु भो ?
यो भन्दा अगाडि २०७० सालको चुनावमा पनि उहाँलाई जस्तो देखेको थिएँ चुनाव हार्दै गर्दा त्यो सालिन अनुहारमा कुनै अध्यारो पन थिएन । अहिले यो ०७४ सालको चुनावमा पनि उहाँले हार्दै गर्दा जो विजयी हुनुभाथ्यो (राम कार्की) लाई आफ्नै हातले माला उनेर लगाई दिएर अंगालो मारेर घरमा प्रवेश गर्दैगर्दा पनि त्यो मुहारमा उज्यालै पन थियो ।
सुन्नमा आको छ उहाँले विजयी उमेरद्वार राम कार्कीलाई आफ्नै घरको फुलको माला लगाईदिनु भो रे ? यो कुरा साँचो हो ?
एकदमै हो । आफैले आफ्नै हातले उनेको माला हो, हामीले पनि होइन । उहाँ आफैले उनेको हो ।
विपक्षीहरुले विजय उत्सव मनाईरहँदा तपाई त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ?
म गएकी थिइन । उहाँ जानु भो । यो चाँही राजनीतिमा एउटा राम्रो संस्कार बसोस् विजयीहरुलाई गाली गर्ने यो कारण जिते उ कारण जिते पैसा ख्वाएर जितो भन्ने हटाउँदै राम्रो संस्कार बसोस् । कम्तीमा पराजयी टिमले पनि विजयीलाई सम्मान गर्न सकोस् भन्ने उहाँको संस्कार हो ।
अव अलिक फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, उहाँसँग तपाँइको कैले भेट भो ? विवाह लभ कि एरेञ्ज ?
०५८ साल फागुन २३ गते विवाह भए पछिदेखि उहाँसंग मेरो संगत हो । हाम्रो दुईवटै खालको विवाह हो । लभ पनि एरेञ्ज पनि । सुरुमा लभ पछि बुवाआमासंग कुरा गरेपछि विहे भाको हो ।
श्रीमतिको नजरमा विश्वप्रकाश शर्मा कस्तो मान्छे ?
मैले धेरै राजनीतिकर्मी देखेकी छु । धेरै असल व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यो मध्ये पनि आफ्नै श्रीमानको बयान गर्न गाह्रो हुन्छ । तर पनि उहाँलाई मैले असल व्यक्तिको रुपमा ठानेकी छु ।
किनभने उहाँले राजनीति सँगसँगै घरपरिवारलाई पनि त्यत्तिकै समय दिईराख्नु भा छ । छर छिमेकलाई पनि परेको हरेक दुःख सुखमा समय दिईराख्नु भा छ । एउटा राजनीतिकर्मीमा हुनुपर्ने गुण उहाँमा छ ।
उहाँ राजनीतिक व्यक्ति धेरै समय बाहिर पनि बस्नुपर्छ, घर परिवारप्रति कस्तो व्यवहार हुन्छ उहाँको ?
मैले अघि पनि भने । मैले उहाँलाई अलिक फरक ढंगले बुझेकी छु । हाम्रो घर परिवारमा हामी मिटिङ बस्छौं । छोरा छोरीलाई गाली नगर्नका लागि,घरमा अशान्ति नहोस् ,शान्ति होस् , सुख होस् भन्नका लागि मिटिङ बस्छौं । महिना भरी भएका गल्ती कमि कमजोरीलाई समिक्षा गर्दै मिटिङ बस्छौं । अब यस्तो गल्ति नहोस् भन्नका लागि मिटिङ बस्छौं ।
अन्त्यमा, राजनीतिज्ञ बाहेक कस्तो व्यक्ति हो विश्वप्रकास शर्मा ?
धेरै गुण छन् उहाँमा । परिवारलाई प्रशस्तै समय दिनु हुन्छ । मेरो जन्मदिन कहिल्यै भूल्नुहुन्न । छोराछोरीको जन्मदिन कहिल्यै भूल्नुहुन्न । मेचीकाली जहाँ भए पनि त्यो दिन उपस्थित हुने गर्नुहुन्छ । चाडपर्वहरु भूल्नुहुन्न । एउटा राजनीतिकर्मी भए पनि परिवारलाई प्रशस्तै समय दिनु भाछ ।
३:२० बजे मंगलबार प्रकाशित
विभिन्न कार्यक्रम गरि क्यानरीको वार्षिक उत्सव सम्पन्न
प्रमोद खरेलको नयाँ गित दन्तैमा सार्वजनिक
आर्मीलाई हराउँदै झापा ११ ले हात पार्र्यो फाल्गुनन्द गोल्डकपको उपाधि